Hogganaan Duula Filannoo Traamp Ka Duraanii Manni Isaanii Sakata’ame
Hojjatonni waajiira qorannoo Fedeeraalaa( FBI ) mana hogganaa duula filaamaata prezidaant Traamp duraanii dhuma baatii Adooleessa darbee sakata’anii jiru. Kunis Raashiyaan deemsa filannoo prezidaantii Amerikaa kan bara 2016 keessaa harka qabdi yoo ta’e qorannaa gaggeeffamu itti fufuu isaanii agrsiisa.
Kan manni isaanii sakata’ame Paul Manafort nama siyaasa Ripaablikaanootaa irratti yeroo dheeraaf hojjatee fi Raashiyaa akkasumas Yukreen waliin hidhata maallaqaa jabaa fi gad fageenya qabu qabaataa ture dha.
Manni sakata’amees handaara magaalaa waashingtoon Varjiniyaa keessatti kan argamu yoo ta’u akeekkachiis kenname tokko ituu hin jiraatiin manichi sakata’ame.Umriin isaanii 68 kan ta’e manafortiif gargaartoota kanneen ta’anhar’a akka mirkaneessanti sakata’aa kana gaggeesuuf Adoleessa 26 ajaja kenname kan qabanii fi galmeeleef waan biraas kan fudhatan ta’u dubbatan.
Manafort fedhii ofiin koree tika nagaa kan senetaa waliin erga wal arganii dubbatanii sa’atilee hanga tokko booda manni isaanii sakata’ame.